USA: Guriga Cad Iyo Saxaafadda Maraykanka Oo Isla Ildaran. – somalilandtoday.com
USA: Guriga Cad Iyo Saxaafadda Maraykanka Oo Isla Ildaran.
(SLT-Washington)Aqalka Cad ayaa kaarkalagu galo kala laabtay wakiilka CNN ee Aqalka Cad saacado kaddib markii ay hadallo kulul is dhaafsadeen madaxweyne Donald Trump.
Muxuu Aqalka Cad yiri?
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @Acosta
Maxay Acosta iyo CNN yiraahdeen?
Ururka Weriyeyaasha ka soo warrama Aqalka Cad ayaa tallabadaasi ku tilmaamay mid aan sal lahayn, waxayna ugu baaqeen Aqalka Cad inuu degdeg uga laabto amarkaas